Ihe nlere nke Google ọ dị? | Martech Zone
Taa, m natara akwụkwọ akụkọ sitere na Google Analytics, mbipụta mbụ nke mpịakọta nke mbụ gụrụ dị ka ndị a:
N’ọnwa a, anyị na-edochi akụkọ ọkọlọtọ “benchmarking” na akaụntụ Google Analytics gị na data ejiri na akwụkwọ akụkọ a. Anyị na-eji akwụkwọ akụkọ a dị ka nnwale iji gosipụta data bara uru ma ọ bụ na-atọ ụtọ karịa ndị ọrụ Analytics. Data dị ebe a sitere na weebụsaịtị niile wepụtara-na-enweghị aha data nkekọrịta na Google Analytics. Naanị ndị na-elekọta webụsaịtị ahụ enyerela ike ịkekọrịta data a na-amaghị aha ga-enweta akwụkwọ akụkọ a "benchmarking".
Mbipụta mbụ tụlere akara aka site na mba, gụnyere Ọnụ Ụgwọ:
Oge Na saịtị:
Mgbanwe Mgbaru Ọsọ:
Enwere nnukwu ihe egwu ịbelata arụmọrụ saịtị gị na ndị a benchmarks. N'ezie, m ga-arụ ụka na ndị a bụ akara aka ma ọlị. Saịtị ọ bụla dị iche na nhazi na ọdịnaya. Ndakpọ nke isi mmalite okporo ụzọ dị iche… site na nchọta na ntụgharị okwu. Ibu ọrụ site na mba dị iche… belụsọ na ị na-eji ọrụ iji chekwaa ihe onwunwe gị. Ajụjụ ndị a anaghị agụnye asụsụ…
Ọ bụ akara aka maka mba naanị gụnyere nleta na nlele peeji nke saịtị dị na mba nwere asụsụ nkịtị? Ka a na-atụgharị saịtị ndị a (nke nwere ike iwe ogologo oge ma ọ bụ sụgharịa ya nke ọma ọ na-abawanye bounces)? Saịtị saịtị ecommerce ahụ? Blọọgụ? Ebe nrụọrụ mmekọrịta? Ibe weebụ?
Nsogbu ọzọ dịkwa. Ngwaọrụ dịka Facebook Ihe mgbakwunye Social na-emetụta ọnụọgụ ego budata n'ihi na Facebook na-ebute ndị ọrụ saịtị. Mgbe onye ọbịa bịara na saịtị gị wee jiri ngwa mgbakwunye tupu ịme ọrụ ọ bụla ọzọ, ha na - akwado. A bụ ihe atụ si onye m ahịa… ị pụrụ ịhụ ebe ha arụnyere, uninstalled na mgbe arụnyere na Facebook Social ngwa mgbakwunye na saịtị ha:
Ndụmọdụ m nye ndị ahịa bụ iji gosipụta saịtị gị na saịtị gị… ọ dịghị onye ọzọ. Ọnụ ọnụego gị ọ na-abawanye ma ọ bụ na-agbada? Ndị ọbịa gị nọ n’elu ma ọ bụ ala? Ọnụ ọgụgụ nke peeji peeji ọ bụla gara nleta elu ma ọ bụ ala? Kedu ka ị gbanwere imewe gị ma ọ bụ ọdịnaya gị iji metụta ahụmịhe ndị ọbịa gị? Anyị na-achọpụta mmụba na oge ndị ọbịa na-anọ na saịtị mgbe anyị na-etinye vidiyo video nwere ezi uche, nri? Mana ọ bụrụ n’anyị anaghị etinye ụdị vidiyo ahụ kwa izu, anyị enweghị ike iche na anyị na-arụ ọrụ dara ogbenye.
Ihe atụ abụọ na blog a:
Anyị gbanwere nhazi blog anyị iji gosipụta edemede na ibe obibi anyị. N'ihi ya, ibiaghachi ọnụego belatara ebe ọ bụ na ndị mmadụ pịrị gaa na post NA ibe kwa nleta mụbara nke ukwuu. Ọ bụrụ na m gosipụtara gị stats na-akọwaghị ya, ọ ga-ahapụ gị ka ị na-eche. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-edebanye aha anyị na saịtị ndị ọzọ, anyị nwere ike ịka mma ma ọ bụ ka njọ karịa nsonaazụ ha.
Anyị wepụtara akwụkwọ akụkọ anyị. Anyị na-agbakwunye ndị debanyere aha kemgbe ịgbakwunye akwụkwọ akụkọ na ndị ọbịa a na-alaghachi ka ha na-agụ ya. N'ihi ya, na ụbọchị ewepụtara akwụkwọ akụkọ ahụ, ọnụọgụgụ peeji anyị dị elu karịa - na nkezi izu anyị abawanyela na 20%. Ọ bụrụ na anyị na-enyocha onwe anyị megide saịtị ndị ọzọ, ha nwere akwụkwọ akụkọ? Hà na-ebipụta edemede? Ha na-achịkọta ọdịnaya ha gbasara ọha mmadụ?
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, akara m na-enye enweghị data bara uru maka m iji melite saịtị m. Enwebeghị m ike iji akara ngosi na saịtị ndị ahịa m. Nanị akara aka dị mkpa bụ nke anyị na-edekọ maka saịtị nke anyị ka izu ọ bụla na-agafe. Ọ gwụla ma Google nwere ike inye nkọwa doro anya n'ime akara ha iji tụnyere saịtị n'ụzọ ziri ezi, ozi ahụ abaghị uru. Inye ndị isi a n'ime nzukọ ozi a nwere ike imebi ihe… Ọ dị m ka ya bụrụ na Google ga-ahapụrụ ngwa ọrụ a ngwa ngwa.
Tags: nnyefemobile tinye-na-cart uduSliderelekọta mmadụ ibe edokọbarausoro mgbasa ozi ọha na ezeNhazi web
Do-It-Yourself Guide to Infographics (Nkeji Onwe Gi)